China KXZ Series oluludaka Pump abavelisi kunye nabathengisi | KAIQUAN
Kunye nokumelana lingonakali alo kunye nokusebenza eliphezulu, KXZ series oluludaka pump ingakumbi ezifanelekileyo ukuthuthwa oluludaka esirhabaxa esomeleleyo ezifana oluludaka intsimbi kunye namalahle yokuhlamba izityalo. Isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi, isinyithi, amalahle, amandla ombane, izinto zokwakha, ishishini lamachiza, ukugcinwa kwamanzi kunye nezinye iinkalo.
Umgangatho wohambo: 16.7-3550 m3 / h
Kaiquan oluludaka Pump
1. Yamkela ithiyori yoyilo yamva nje kunye nendlela eyiliweyo yokuhamba kwezigaba ezibini, sebenzisa iCFD, i-CAE nolunye uyilo lwetekhnoloji yale mihla, ngokusebenza ngokugqibeleleyo kwe-hydraulic kunye nokusebenza kakuhle.
2. Unyango olukhethekileyo lwenziwa kumacandelo anxitywa ngokulula anje nge-diaphragm, indawo yokungena, kunye nomsesane wangaphandle weplate yokhuseleko. I-volute kunye neplate yokugada yenzelwe ubukhulu obungalinganiyo, kwaye icandelo ekunxitywa lula liyaqina, elibuphucula kakhulu ubomi beendawo zokuhamba.
3. Isiziba se-impeller samkela uyilo lokutywina lwezoqoqosho, olonyusa isiphumo sokutywina, kunciphisa ukhukuliseko kunye nokukrala, kwaye kuphucula ngakumbi ukunganyangeki.
4. Isinyanzelo siyilelwe ngeebhleyidi ezingasemva ezingafaniyo, ezinokuthi zinciphise ukubuyela umva kwesilayidi, sinciphise uxinzelelo lokutywina, kwaye siphucule ukusebenza kwempompo.
5. I-Rotor inokuhlengahlengiswa nge-axially ukuqinisekisa isithuba se-impeller, ukuze impompo iqhubeke ngokufanelekileyo ixesha elide.
6.Fumana impeller abangabancedani kunye nokupakisha indibaniselwano itywina okanye itywina ngoomatshini ukuqinisekisa akukho ukuvuza zodaka oluludaka.
7. Indawo yokuphuma kwempompo inokufakwa kwaye isetyenziswe kwisithuba se-45 ° kwaye ijikelezwe kwii-engile ezisibhozo ezahlukeneyo ngokweemfuno.
Egqithileyo 1200-1600 ZLB, HLB nkqo yezihlunu Flow Pump, Mixed Flow Pump
Okulandelayo: KZJ Series oluludaka Pump
Sumzobo tructural of KXZ Series oluludaka Pump
Spectrum Umzobo kunye nenkcazo ye-KXZ Series Slurry Pump